Waa maxay qorraxdu: astaamaha, halabuurka iyo shaqada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 08/06/2021 10:00 | Astronomy
Xiddigta samaysa xarunta nidaamka qorraxda isla markaana ugu dhow dhulka waa qorraxda. Qoraxda awgeed, dhulkeenu wuxuu ku bixin karaa tamar qaab iftiin iyo kuleyl ah. Waa xiddigani soosaara xaaladaha kaladuwan ee cimilada, badda iyo xilliyada sanadka. Si kale haddii loo dhigo, waa si hufan maxaa yeelay qorraxdu waxay siisaa xaaladaha aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah jiritaanka nolosha. Astaamaha qorraxdu waa kuwo gaar ah oo wax qabadkeedu aad u xiiso badan yahay. Waxa jira dad aan garanayn waa maxay qorraxdu ama astaamaheeda, shaqadiisa iyo hawlgalkeeda.
Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeyneynaa si aan kuugu sheegno qorraxdu waxay tahay, astaamaheeda iyo shaqadeeda.
1 Waa maxay qorraxdu
3 Waa maxay qorraxdu: qaab-dhismeedka gudaha
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado qorraxdu waxay tahay iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedo. Maskaxda ku hay in ay tahay sheyga ugu muhiimsan ee samada u leh badbaadadayada iyo tan noolaha intiisa kale. Waxaa jira qalab fara badan oo sameeyay qorraxda waxaana lagu qiyaasaa inay bilaabeen inay isbarbar dhigaan ficilka cuf isjiidadka maadaama uu weynaaday. Gudiga cuf isjiidadka ayaa ah waxa sababay arrinta in kolba in yar isu uruursho natiijadaasna, heer kulku sidoo kale wuu kordhay.
Waqtigu wuxuu yimid markii heer kulku aad u sarreeyay oo uu gaadhay qiyaastii hal milyan oo digrii Celsius. Waqtigaan marka heerkulka iyo waxqabadka culeyska oo ay weheliso arrinta agglomerated ay bilaabeen inay sameeyaan falcelin nukliyeer aad u xoog badan oo ah tan dhalisay xiddig xasilloon oo aan maanta naqaan.
Saynisyahannadu waxay ku andacoodaan in aasaaska qorraxdu ay tahay dhammaan falcelinta nukliyeerka ee ku dhaca fal-falanqeeyaha. Waxaan u tixgelin karnaa qorraxda guud inay tahay xiddig si caadi ah u caado ah inkasta oo ay leedahay cuf, radius, iyo waxyaabo kale oo ka baxsan waxa loo arko celceliska xiddigaha. Waxaa la oran karaa waa astaamahaas oo dhan oo ka dhigaya nidaamka kaliya ee meerayaasha iyo xiddigaha nolosha ka taageeri kara. Waqtigan xaadirka ah ma naqaanno nooc kasta oo nolosha ka baxsan nidaamka qorraxda.
Aadamuhu had iyo jeer wuxuu la dhacsanaa Qorraxda. In kasta oo aysan si toos ah u eegi karin, waxay abuureen habab badan oo ay ku bartaan. U fiirsashada qorraxda waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo teleskoobyada durbaba ka jira dhulka. Maanta, horumarka sayniska iyo teknolojiyadda, waxaa suurtagal ah in la barto qorraxda iyada oo loo marayo isticmaalka dayax gacmeedyada. Adoo adeegsanaya muraayadaha indhaha (spectroscopy), waad garan kartaa halabuurka qorraxda. Hab kale oo loo baran karo xiddigani waa meteorites. Kuwani waa ilaha macluumaadka maxaa yeelay waxay ilaaliyaan asalka asalka ah ee borotoktar daruuriga ah.
Markaynu ogaano waxay qorraxdu tahay, aynu aragno astaamaha ugu waaweyn ee ay leedahay:
Qaabka qorraxda ficil ahaan waa mid goos goos ah. Qorraxdu si ka duwan xiddigaha kale ee caalamka, qorraxdu waxay ku dhowdahay gabi ahaanba qaab ahaan. Haddii aan ka eegno meeraheenna, waxaan arki karnaa saxan wareega oo dhammaystiran.
Waxay ka kooban tahay cunsurro kala duwan oo aad u tiro badan sida hydrogen iyo helium.
Cabbirka xagal ee qorraxdu waa qiyaastii nus darajo haddii cabirka laga qaadayo meeraha Dunida.
Wadarta guud waa qiyaastii 700.000 oo kilomitir waxaana lagu qiyaasay cabirkiisa xagal ahaan. Haddii aan isbarbardhigno cabirkiisa iyo kan meeraheenna, waxaan aragnaa in cabirkiisu uu qiyaas ahaan ka weyn yahay 109 jeer. Sidaas oo ay tahay, qorraxda waxaa loo kala saaraa xiddig yar.
Si loo helo halbeeg lagu cabbiro koonkan dhexdiisa, masaafada u dhexeysa qorraxda iyo dhulka waxaa loo qaatay cutub xiddigiska ka mid ah.
Cufka qorraxda waxaa lagu cabbiri karaa xawaaraha in dhulku helo marka uu kuugu soo dhowaado.
Sida aan wada ogsoonahay, xiddigani wuxuu maraa waxqabadyo xilliyeed iyo rabshad wuxuuna laxiriiraa birlabta. Waqtigaas qorraxda qorraxda, nabaro iyo qarxinta walxaha dhiigga ayaa soo baxa.
Cufnaanta qorraxda ayaa aad uga hooseysa tan dhulka. Tani waa sababta oo ah xiddiggu waa hay'ad gaas ah.
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee qorraxda ayaa ah iftiinkeeda. Waxaa lagu qeexaa inay tahay tamar la shidi karo halkii cutub ee waqtiga ah. Awoodda qorraxda waxay u dhigantaa in ka badan toban oo loo kiciyey 23 kiilow. Taa bedelkeeda, awoodda hilaaca ee nalalka iftiinka la og yahay waxay ka yar tahay 0,1 kilowatts.
Heerkulka dusha sare ee qorraxda wax ku oolka ahi waa qiyaastii 6.000 digrii. Tani waa celcelis heer kul ah, in kasta oo xuddunta iyo kore ay yihiin aagag diiran.
Waa maxay qorraxdu: qaab-dhismeedka gudaha
Markaan ogaanno qorraxdu waxay tahay iyo astaamaha ugu waaweyn ee ay leedahay, waxaan eegaynaa waxa uu yahay qaabdhismeedka gudaha. Waxaa loo tixgeliyaa xiddig cufan huruud ah. Cufnaanta xiddigahaasi waa inta u dhexeysa 0,8 iyo 1,2 jeer cufnaanta boqorka qorraxda. Xiddiguhu waxay leeyihiin astaamo muuqaal gaar ah oo kuxiran iftiinkooda, cufnaanta, iyo heerkulka.
Si loo fududeeyo daraasadda iyo fahamka astaamaha qorraxda, qaab-dhismeedkeedu wuxuu u qaybsan yahay 6 lakab. Waxaa loo qaybiyaa meelo aad u kala duwan waxayna ka bilaabataa gudaha. Waxaan uqeybineynaa oo tilmaamaynaa astaamaha ugu waaweyn ee lakabyada kala duwan.
Xuddunta qorraxda: Cabirkiisu wuxuu qiyaastii yahay 1/5 radius-ka qorraxda. Halkani waa halka laga dhaliyo dhammaan tamarta ka dhalata heerkulka sare. Heerkulka halkan wuxuu gaadhay 15 milyan oo Celsius ah. Sidoo kale, cadaadiska sare wuxuu ka dhigayaa aag u dhigma falceliyaha isku dhafka nukliyeerka.
Aagga shucaaca: Tamarta ka soo baxda nukleus waxay ku faaftaa habka shucaaca. Goobtan, dhammaan walxaha jira waxay ku jiraan gobolka plasma. Heerkulka halkan ma ahan mid aad u sarreeya sida xuddunta dhulka, laakiin wuxuu gaadhay ku dhowaad 5 milyan oo Kelvin. Tamarta waxaa loo beddelaa fotonisyo, kuwaas oo lagu kala qaado oo dib loo cusbooneysiiyo marar badan qaybaha ay ka kooban tahay plasma.
Aagga wax lagu kala qaado Aaggan ayaa ah qaybta ay photonku gaadhaan aagga shucaaca heer kulkuna waa ku dhowaad 2 milyan oo Kelvin. Ku wareejinta tamarta waxay ku dhacdaa isku-dhafid, maxaa yeelay arrinta halkan ku taal ma aha mid sidaas ionized ah. Wareejinta tamarta wareejinta tamarta waxay ku dhacdaa dhaqdhaqaaqa wareegga gaaska ee heerkulka kala duwan.
Sawir qaade: Waa qayb ka mid ah dusha muuqda ee xiddigga weligoodna waannu doonaynay. Qorraxdu ma aha mid gebi ahaanba adag, laakiin waxay ka samaysan tahay plasma. Waxaad ka arki kartaa sawirka goobta telescope-ka, illaa inta ay leeyihiin shaandho si aysan u saameynin khadkayaga aragtida.
Chromosphere: Waa lakabka ugu hooseeya ee sawirka, oo u dhigma jawigiisa. Iftiinka halkan waa ka casaan yahay, dhumucduna way is beddelaysaa oo heerkulka u dhexeeya waa inta u dhexeysa 5 iyo 15.000 digrii.
Taaj: Waa lakab leh qaab aan caadi ahayn oo ku fidsan raadiyeyaal badan oo qorraxda ku shaqeeya. La arki karo isha qaawan, heer kulkeedu waa ilaa 2 milyan oo Kelvin. Ma cadda sababta heer kulka lakabkani aad u sarreeyo, laakiin waxay la xidhiidhaan birlabta birlabta ee qorraxda soo saarta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa ay qorraxdu tahay iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Waa maxay qorraxdu